Education Elect Engineer Duaal - Gaa! AKỤKỌ AKWỤKWỌ (7E SPECIALIZATION YEAR // elu // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > ọkụ eletrik > Igwe injinia Duaal
Na 7e specialization year Electrical engineer (dual / BSO) ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị na mmezi, mgbakọ na mmezi nke igwe elu, ọnụ ụzọ, ọnụọgụ (nkà na ụzụ, sayensị kọmputa, pneumatics, hydraulics); N'aka nke ọzọ na ikesa ike, ụgbọala na nnukwu nkà na ụzụ. Ọ bụ otu ọzụzụ bara uru. Site na mmezu ihe, oru na nyocha, ị na-eme kawanye ihe ọmụma nke njikwa kọmputa na usoro mmepụta ihe. Ị mụtara inye ọrụ ọma na anya maka nchekwa, ahụike na gburugburu ebe obibi.
zutere sọrọ Learning ị jikọtara ihe kachasị mma site na ụwa 2: ịmụ akwụkwọ na ịmụta ọrụ. Ị na-eji ụbọchị 3 rụọ ọrụ n'ala. Ị ga-amụta ihe gbasara okwu n'ozuzu na ihe ọmụma gbasara ihe ọmụmụ gị na ụlọ akwụkwọ.
Ị ga-aga ụbọchị 2 maka ndị isi gị n'ozuzu gị, isiokwu gị gbasara nkà ihe ọmụma, egwuregwu na ihe omuma na ihe omuma bara uru na ogo gị. Ị ga-arụ ọrụ ụbọchị 3 ọzọ. Ị na-edebe ihe omume gị na ndekọ gị. Onye nkuzi gị ga-ele anya na ọganihu gị na gị, dịka onye nlekọta na-arụ ọrụ n'ala.
Ịmụ ihe abụọ
Gịnị mere ị ga-eji họrọ mmụta abụọ?
Ị na-amụta na a ezigbo ọrụ na gburugburu ebe obibi
Ị na-amụba ọrụ gị ohere
Ị kwenyere na ngwaọrụ ọhụrụ na teknụzụ
Ịmụta site na-eme na-abawanye na-akpali.
Ị na-eme nkà dị nro nke dị mkpa n'ahịa ọrụ, dị ka ịmekọrịta, ịmalite ime ihe, iwepụta oge, ...
> Ihe omuma gbasara omumu omuma
Ị ziri ezi
Ị nwere mmasị na nrụnye eletriki na igwe? Ị dị mma na nke ziri ezi? Ị na-achọ iji aka gị rụọ ọrụ, kamakwa kọmputa? Ị ga-achọ ịmụta ijikọta na ọrụ?
Ịnwere ike ịbanye naanị afọ 7 ma ọ bụrụ na ị nwetalarị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. O doro anya, ị natara ọzụzụ na nkwụsị Eletrik: ọkụ eletrik of Ngwunye Ngwunye Electric.
Ọ bụrụ na ị gafee usoro a ị ga-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị ma ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ ma ọ bụ nọgide na-amụ ihe. Ọrụ ndị nwere ike ịnweta bụ ụlọ ọrụ eletrik, teknụzụ kọmputa, eletrik, wdg. Ị nwekwara ike ịga n'ihu na-amụ akwụkwọ. Mmụta kachasị elu (se-n-se, HBO, ọkachamara ọkachamara) n'ime ịdọ aka ná ntị bụ n'ezie n'etiti ndị nwere ike ime. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ ebe a.
Gaa na tebụl nkuzi nke 7e specialization year Electrical Engineer Duaal (BSO) ebe a:
Ihe na-adịghị mma (36KB, .pdf)
Usoro a na-akwụ ụgwọ n'ezie. 7 na ndị ọrụ 10 ga-akwụ onye ọrụ ụgwọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha nwere ụdị nke ọrụ ebe a na-azụ hadika nnyocha UNIZO mere. "Ọmụmụ ọrụ ebe obibi ga-abụ ihe dị mkpa na ọmụmụ ihe niile, ma jikọọ ya na mkpa nke ụlọ ọrụ ndị ahụ", dị ka otu UNIZO CEO Karel Van Eetvelt si kwuo.